Borrasca Fabien: sida loo aasaasay, sifooyinka iyo waxyeelada | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 11/06/2021 10:00 | Dhacdooyinka saadaasha hawada
Waxaa ka mid ah duufaanno fara badan oo ku soo dhacay jasiiraddeenna sannadihii la soo dhaafay duufaan Fabien. Waa duufaantii lixaad ee loogu magac daray xilli 2019-2020. Waxay ku bilaabatay digniin liin ah sababo la xiriira duufaanno dabeylo xoog leh leh oo abuuray ifafaalo xeebeedyo badan oo Galicia ah Waxaas oo dhami waxay dhaceen December 18 markay ahayd 22:30 pm. Markii dambe digniin cas ayaa la sameeyay oo duufaanku wuxuu ku fiday Badda Cantabrian.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato duufaanta Fabien, sida ay ku bilaabatay iyo astaamaha ay yihiin.
1 Abuuritaanka duufaanka Fabien
2 Phenomena iyo digniinta duufaanka Fabien
3 Saameyntii ugu weyneyd ee ay ku yeelatay Isbaanish
4 Daraasadaha duufaanka
Abuuritaanka duufaanka Fabien
Marinka duufaantan waxay ku leexatay dhamaan Bay of Biscay dhanka jihada Faransiiska, iyadoo aad u dhakhso badan. Waxaan dhihi karnaa taas Saacadihii ugu horreeyay ee 22aad, dhammaan cilladaha uu ka qabay Spain ayaa ku dhowaad joojiyay. Duufaantan waxaa lagu sameeyay socodka aag aad u daran oo qoyan oo ka tallaabay Badweynta Atlaantik oo dhan. Waxaa la dhihi karaa wabi jawi ku raran yahay roob ayaa la sameeyay, aaggan oo leh qoyaan badan wuxuu sameeyay duufaanta Elsa illaa maalmo yar ka hor.
Ogaanshaha duufaanta Fabien waxay bilaabatay 19-kii markay ahayd 18:996 galabnimo taas oo hoos u dhac yar oo cadaadis ah laga ogaan karo koonfurta Newfoundland iyadoo bartanka kaga jirta wax ka yar 24 hPa Ka dib 18 saacadood, 20: XNUMX pm ee XNUMX-ka, bartamaha duufaanku waxay horeyba ugu yaalay bartamaha Waqooyiga Atlantik waxayna leedahay qoto dheer oo leh qiimayaasha 970 hPa. Sida la filan karo, hoos u dhaca cadaadisku wuxuu sababi doonaa dabaylo badan oo xoog leh oo ay weheliso roobab.
Adiga oo leh kala duwanaanshaha cadaadiskaan, a walxaha qarxa ee cyclogenesis. Waa laga bilaabo xilligan oo ay si deg deg ah ugu dhaqaaqday jihada Yurub oo ay hoos ugu soo degtay wabiga hawada. Xaruntu had iyo jeer waxay ku wareegsanayd loolka 45-50ºN. Horeba 22-keedii, duufaantii Fabien waxay ku dhammaatay Nederland iyo Danmark.
Phenomena iyo digniinta duufaanka Fabien
Galabnimadii 21-aad, digniin cas oo xarig ah ayaa la soo saaray (oo leh marin dhan 140 km / h) waqooyiga Coruña iyo Lugo iyo koonfur-galbeed ee Buuraha Cantabrian ee Asturias, digniinta liin dhanaanna waxaa laga soo saaray inta hartay ee Galicia, Asturias, ku dhowaad dhammaan Castilla y León. Nidaamka dhexe iyo buuraha Castilla-La Mancha iyo Bariga Andalusia (qiimaha u dhexeeya 90 iyo 120 km / saacaddii, sida ay qabaan ismaamulada), inta udhaxeysa 21ka galabnimo iyo 22aad qeybta hore ee maalinta.
Marka laga hadlayo ifafaalaha xeebta, Badda Cantabrian iyo xeebta Atlantic ee Galicia waxay soo saareen digniin casaan ah maxaa yeelay xoogga dabaysha ee ka imanaya galbeedka ilaa koonfur-galbeed ee xoogga 8-9, iyo maxalliga ah 10, iyo heerka badda oo dhererkiisu yahay 8-9 mitir. Inta badan meelaha kale ee xeebta ee jasiiradda iyo jasiiradaha Balearic waxay soo saareen digniin liin ah oo loogu talagalay digniinta xeebaha. Roobku ma ahayn muujinta dhacdadani, laakiin wuxuu ahaa dabaysha. Iyada oo ay taasi jirto, digniino heer iyo liin ah ayaa la soo saaray roobabkii lagu ururiyey 12 saacadood oo ka sarreeya 80 mm, gaar ahaan meelaha buuraleyda ah ee gobolka Albacete.
Saameyntii ugu weyneyd ee ay ku yeelatay Isbaanish
Markii aan ogaanno sida loo sameeyay iyo astaamaha ay ahaayeen, waxaan arki doonnaa waxa ay saameyn ku yeelatay jasiiradda. Saameynta ugu caansan ee duufaanta waxaa sababay mowjadaha mowjadaha daran ee saameeyay dhammaan aagga Galicia iyo Badda Cantabrian. Badanaa hirarka waxaa sababay dabeyl xoog leh oo dabeylo wata, oo ay ku jiraan qaar badan oo ka mid ah duufaanno. Duufaanadan dabaylaha ah waxay saameeyeen qayb weyn oo ka mid ah jasiiradda gaar ahaan waqooyi-galbeed iyo Jasiiradaha Balearic.
Si ka duwan wixii ku dhacay duufaantii hore Elsa, ma jirin wax dhimasho ah oo lala xiriirin karo marinka duufaanka Fabien. Si kastaba ha noqotee, burburka maaddada ayaa ahaa mid aad u tiro badan meelaha ugu daran. In kasta oo roobabku ay ahaayeen kuwo guud ahaaneed, diiwaanka ugu dambeeya ee duufaantan la qabtay waxay ka sarreysay 60mm 24 saacadood gudahood meelaha laga soo saaro AEMET. Rikoor la sheegay ayaa laga helay Grazalema halkaasoo laga soo ururiyay 145.2 mm maalintii 21.
Iyada oo la tixgelinayo in laga bilaabo Diseembar 16 illaa 22 uu jiray hawo xoog leh oo aad u qoyan oo si toos ah u socota aagagga usbuuca oo dhan. Iyaga ka mid ah, duufaannadii Daniel, Elsa iyo Fabián ayaa si isdaba joog ah u dhacay, roobabkii urursanaana way fiicnaayeen.
Fikradaha bambo saadaasha hawada ama cyclogenesis qarxa ma aha wax alifay warbaahin. Waa ereyo ku dhashay bulshada cilmiga leh taariikh badana ku leh. Khubarada saadaasha hawada waxay bilaabeen inay tixraacaan noocyada dabeylaha oo leh astaamo sida walxaha qarxa ama magac, iyagoo ugu yeeray bambooyin. Fikradda ayaa ka soo baxday iskuulka Bergen ee ku yaal Norway, halkaas oo aabayaashii aasaasey cilmiga saadaasha hawada ee casriga ahi ay wax ku barteen, waxayna caan ku noqotay markii laba khabiir ku takhasusay saadaasha hawada oo ka tirsan machadka Massachusetts Institute of Technology ay ku sheegeen maqaal 1980kii. si loo qeexo duufaan lumisay in ka badan 24 milyaar oo cadaadis ah hal maalin gudaheed, si la mid ah Fabien, oo ay magacawday Hay'adda Saadaasha Hawada ee Gobolku.
Isbedelka cimilada, waxaa loo maleynayaa in digniinta cas ee digniinta ah ay yeelan doonaan wax ka yar ama ka yar 3dii sanoba mar iyadoo kuxiran isbeddelka saadaasha hawada ee aan tixgelin doonno markii aan baraneyno duufaanta. Mid ka mid ah waxyaalaha in nagu ilaaliya dhulkeena waa antiyclone ee Azores. Waa anticyclone weyn oo joojiya dhammaan gargaarka duufaanka. Xaqiiqdii, waxay ahayd kicinta si loo joojiyo duufaantan laga bilaabo 22nd.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto duufaanta Fabien, asalkeeda iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Tuuji Fabien